Mpisolovava efa Milan - Ny fomba haingana indrindra ny hahita ny mpisolovava
Mpisolovava efa Milan — Ny fomba haingana indrindra ny hahita ny mpisolovava
Ratsy be ny fisaraham-panambadiana ianao, dia fantatrao. Noho izany dia zava-dehibe mba hahazoana antoka ny fiarovana ny tena matihanina ny fisaraham-panambadiana ny mpisolovava ao Milan sy ny faritany, ny ambony indrindra maha-matianina, izay dia azo antoka iray ° fanohanana manontolo sy tanteraka, amin’ny ny sehatry ny fianakaviana ny lalàna. Ny fanompoana dia teraka miaraka amin’ny tanjona ny hanampiana ny mpampiasa mba orient ny tenany amin’ny existential fotoana izao dia marefo indrindra, izay mahita ny fandravana ny tetikasa ny fiainana miaraka. Amin’ny alalan’ny vavahadin-tserasera, ny voalohany hifandray amin’ny mpahay lalàna, dia efa maimaim-poana, fotsiny ny mameno ny endrika omena, izay niainga ny lafiny sasany, toy ny fisian’ny ankizy tsy ampy taona, ny fitondrana ny fizarana ny fananany amin ny fotoana ny fanambadiana (mizara na fisarahana), sns. Ny fangatahana dia valiny avy hatrany ny iray amin’ireo mpisolovava ny fisaraham-panambadiana mpisolovava ny mpiara-miasa, izay ricontattano antoko liana mba hanome ny hevitra matihanina toy ny inona ny olana dia nandroso, ary ny mety ho fanapahan-kevitra amin’ireo olana izay efa nivoaka. Afa-tsy izany fotoana, rehefa avy nandray ny hevitro an-tserasera, ary mba nanana fahafahana hahazo efa hevitra momba ny fahafahana ny matihanina amin’ny fanontaniana, afaka manapa-kevitra malalaka mba hanankina aminy ny raharaha. Isika no hihaona ao amin’ny fianarana ny manapa-kevitra ny fomba manaraka sy manatanteraka ny rehetra amin’ny fanjakam-birao ny manaraka. Fanairana Mena Ny sivily ny fitadiavana marimaritra dia rafitra vaovao ny fanapahan-kevitra an-trano ny fifandirana, hafa ny Fitsarana na ny Fitsarana momba ny Fandriampahalemana. Izany dia mamela ny fifandirana ny ho tapa-kevitra haingana sy ny vidiny tena ao: noho izany dia tena ilaina, indrindra fa any amin’ny adihevitra izay avy amin’ny krizy ny conjugal fifandraisana, sy ny an’ireo fifandirana hitsangana avy eo amin’ny mpandova. Izy no manam-pahaizana mpampanoa lalàna. Mena. Mitady fisaraham-panambadiana mpisolovava ao Milan sy ny faritany. Mitady olona manam-pahaizana manokana izay tsy afaka miaro ny zon’olombelona ao amin’ny fomba tsara indrindra.
Mitantana ny fisarahana dia tsy zavatra mora, sy hahita olona mahafeno ny fepetra izay afaka manolotra ° ny fanohanana eo amin’ny sehatry ny fianakaviana ny lalàna, dia bebe kokoa izany. Izany no mahatonga ny nahaterahan izany fanompoana izany, fa manana ny tanjona ny manome fiarovana ho an’ny tena matihanina ny famahana ny olana. Ny nanohitra ny fisaraham-panambadiana. Ao amin’ny tsara ny toe-javatra, araka ny fisarahana, ny mahazatra maniry hanohy ny fanafoanana ny fanambadiana ny fifandraisana, ny vadiny sy ny vadiny mipetraka eo amin’ny latabatra, ary manapa-kevitra, ao ny tombontsoan’ny roa tonta, ny vokany. TOHIZO ny FAMAKIANA ny fisaraham-Panambadiana fohy. Ny voalohany volana desambra, rehefa, ny lalàna ny Sary-Baslini, dia nampidirina ao amin’ny Firenena ny fisaraham-panambadiana, izany hoe ara-dalàna ny fizotry ny mifarana ny fanambadiana. Rehefa afaka efa-polo taona, dia amin’ny Efi-trano nanome ny fanekena ny lahatsoratra. TOHIZO ny FAMAKIANA ny fomba Maro ireo mpivady izay, ambonin’ny zava-drehetra, ny lasa, efa nampiasa ny fisaraham-panambadiana noho ny vola lany izay no andrasana, ary ny ilaina ny mitodika ny mpisolovava. Nefa, noho ny lalàna misy novambra tsy misy. TOHIZO ny FAMAKIANA Ny sisa velona ny fisotroan-dronono dia ny hizara ny fisotroan-dronono izay mandalo ny vadinao, eo amin’ny fotoana izay ny olona iray izay mpihazona no decedere.
Fa inona no mitranga rehefa
TOHIZO ny FAMAKIANA Listlessness, herisetra, ary ireo fiovana fitondran-tena, ary koa ny alahelo, hatezerana, tahotra, sy ny korontana ny ara-pihetseham-po, miezaka ny hivoaka tena matetika ny ankizy rehefa ny ray aman-dreny roa nisara-panambadiana. CONTINUE READING Efa misy fotoana ianao, dia mampalahelo fa ho tonga saina fa ny fanambadiana intsony ny asa izy ary resy lahatra ianao fa ny fahasamihafana dia irreconcilable: noho izany dia te-hamarana ity mamatotra nefa tsy mahay mangataka ny fisaraham-panambadiana. TOHIZO ny FAMAKIANA ny fisaraham-Panambadiana sy ny ankizy. Listlessness, herisetra, ary ireo fiovana fitondran-tena, ary koa ny alahelo, hatezerana, tahotra, sy ny korontana ny ara-pihetseham-po, miezaka ny hivoaka tena matetika ny ankizy rehefa ny ray aman-dreny roa nisara-panambadiana. TOHIZO ny FAMAKIANA-Karazany ny fisaraham-panambadiana. Tsarovy fa ny fisaraham-panambadiana dia fohy sy ny manokana ny zavatra afaka ny roa manao antso rehefa misy ny mitana ny fifanarahana eo amin’ny resaka rehetra dia zava-dehibe mba ho tapa-kevitra amin ‘ny faran’ ny fifandraisana ao anatin’ny fanambadiana.
Amin’ity tranga ity
TOHIZO ny FAMAKIANA Inona no Misahana ny fisaraham-Panambadiana. Ny fahadisoana amin’ny voambolana, satria tsy misy akory. Ny ivon-toerana mba izay isika dia manondro fa tsy ny fisarahana amin’ny anjara-raharahany. Fantatsika fa ny fisarahana dia tsy hamarana ny fifandraisana. TOHIZO ny FAMAKIANA ny fanavaozana Ny fisaraham-panambadiana fohy izany dia mamela, araka ny voalaza, ny antso tsy ny Kaominina, fa koa ny fandalinana ny mpisolovava: amin’ity tranga ity, dia ho mpisolovava (na ny ara-dalàna ny roa tonta) mba hanomana ny fifanarahana izay avy eo. TOHIZO ny FAMAKIANA ny Fomba ahafahantsika mahafantatra ny fisaraham-panambadiana fohy izany dia mamela ny mpivady mba hanovozana ny fifanarahana mivantana amin’ny tanan ny mpahay lalàna, amin’ny iray ihany ny vokatry ny fitsarana namoaka ny mpitsara, tsy manana, na dia izany aza, mba ho vavolombelona eny amin’ny Fitsarana, ary tsy manana ny mandray ny fiampangana. TOHIZO ny FAMAKIANA tadidinao ve ny vady ny sarimihetsika ny ady Ny Raozy. Eto dia ireo dia tsy mbola miditra amin’ny fisaraham-panambadiana amin’ny fiaraha-mientana ifampizarana manaiky, toy izany dia mihevitra fa ny roa miombon-kevitra eo amin’ny rehetra, ny tsy ampy fanononana tsy ny fandravana ny fanambadiana. TOHIZO ny FAMAKIANA Ianao mahita ny tena revolisiona ao amin’ny sehatry ny fisaraham-panambadiana, ary, indrindra indrindra, ny fikojakojana vokatry ny fandravana ny fanambadiana fatorana, manaraka ny fitsarana, izay efa nametraka fitsipika. TOHIZO ny FAMAKIANA Ny fanovàna ny fizotry ny fahatorotoroana roa heny-pandriana, naniry ny papa François dia hahamaro ny fitsaran invalidity, izay ho tratrarina mora foana ao anatin’ny dimy amby efa-polo andro avy ny fotoana fa ny papa dia resy lahatra fa tsy latsaky ny antsasany izany
Ny sehatry ny heloka bevava